22 Ardey dan yar ah oo loogu deeqay waxbarasho Jaamcada PSU – SBC
22 Ardey dan yar ah oo loogu deeqay waxbarasho Jaamcada PSU
Posted by Webmaster on September 18, 2011 Comments
Xarunta Jaamacda Puntland State University PSU ee magalada Garowe ayaa maanta waxaa lagu qabtey munaasab balaaran oo ay goobjoog ka ahayeen mamulka sare ee jamacada PSU ,ardeyda waxkabarta iyo walidintooda, waxana ujeedku ahaa sidii ay uga mahacdelin lahayeen fursado waxbarasho oo ay sameyeen ardey soomaaliyeed oo degan dalka inigriiska kuwaasi oo lacag soo aruuriyey kadibna ugu deeqay waxbarasho jaamacadeed oo lacag laan ah ardey gaaraysa 22 oo iskugu jira danyar iyo agoomo kana koobaan wiilala iyo gabdho.
UK Somali Students iyo Galobal Reachment Foundation xaromuhooda kala yihin England iyo Canada ayaa ahaa labada urur oo maanta sida weyn ay u amanayeeyn dadki ka hadlay madasha oo isku duubaan hadii ay waalidin ama ardey noqonlahaayeen.
Madaxda jaamacada PSU Dr,Maxamuud Shiikh Xaamid oo furey kulankii maanta ayaa mahad balaaran iyo bogaadin kasoo jeediyey halkaasi waxan uu ka sheekey qaabki loo soo xuley ardeyda helay deeqda waxbarasho.
Dr,Xaamid ayaa tilmaamey in dadka deeq bixiyaasha ah ay u kala xulanayeen ardeyda laba siyaabood,tan kowaad iyada oo loo eegayo sida ay ukala tabaaylsan yihiin iyo qiimeyn himiladooda mustaqbalka oo horey ay u soo qoreen arimahaasi.
Xukun waa gudoomiyaha qalinlaylada Soomaaliyeed waxana u maanta ku hadlayey magaca waalidiinta PSU isagoo tilmaamey in magaca soomaaliyeed uu ku dhisan yahay deeqda waxbarasho ey bixiyeen dhalinta Ingriiska waxkabarta maadaama kalimada soomaal kadhigantahay martida caana u soo maal oo u taagan sida la isku caawinayo ama la isku soorayo.
“Waxaan kasoo bixn doonaa booski aad nasiiseed noqon mayno kuwo ku ciyaara fursada waxbarasho ee qaaliga ah” ayaa waxa yiri mid kamid ah ardeyda heshay deeqda waxbarasho oo lagu magacaabo Maxamed
Sidoo kale gabadhii ku hadshey magaca gabdhaha helay deeqda waxbarasho ee Jaamacada PSU Garowe ayaa cadeysey in ay jiraan dad badan o aan helin fursadan waxbarasho ay iyagu heleen waxaan ay ku bogaadisey nafteeda iyo saaxibadeedba in ay ka faai’deystaan sida ug haboon.
Talaabadan ay isku xilqaameen dhalin Soomaaliyeed oo lacag dhexdooda ka uruuriyey kadibna fursad wabxrasho ay u noqotey kuwooda baahan ama aan awoodin kharashadka iyadoo aan la eegayn deegaan ama qabiil ayaa waxay muujineysaa biiisel,waxana ay ka dhabeyneysaa maahamaahdii Soomaliyeed “gacmo wadajir bey wax ku gooyaan”
waaw axaa galkaio looga qaadi waayay maxaa yeelay dad ka tabalaysan baaa iroi axaa garoowe ka dhigay waxii nacfaha ahaa